Maxaa la gudboon madaxweynaha Mustaqbalka Puntland.
Waxaa fooda inagu soo haya doorashadii jagadda madaxweynenimo ee Puntland. Doorasada 2008 oo u muuqata mid rag badani isu soo taageen. Hardan badanina uu ka dhici doono. Lakiin waxaa hubaal ah tiradii doontaaba ha is sharaxdee in nin qudha un la dooran doono.
Sidaa awgeed, waxaa iswaydiin mudan hadii doorashada lagaga adkaado madaxweynaha maanta talada haya, waa Jen. Cadde Muusee, tolow dhibaatooyinka yaala maanta Puntland xal ma loo heli doonaa, mase dhici kartaa in shacabka Puntland nabad iyo badhaadho ay galaan. Mise sheekadu waa kaalinkii geela oo uu hadba nin wadaanta darsanayay oo cidina dan guud iyo adeeg shacab umaba socoto, ee tuubada suro weeye arinku.
Markaad fiirisid figrada musharaxiinta qaarkood ay ka duulayaan waxaa kuu soo baxaysa inay tahay warfaa qabtay, wardheeraana ku xugay ee waa kalinkii warsuge. Markaad eegto (Platform-ka) ama qorshayaasha (waaba hadii hadal iyo qorshe dhaxal gal ah ayba soo bandhigeene) musharaxiinta qaarkiis ama badankoodaba waxaad arki in aysan abaarin boogaha in la dhayo u baahan. Markaad eegto taageerayaasha ragga is sharaxay badankii waxaad dareemi in weli uusan shacabka reer Puntland bislaan, ninkastana jifadiisa hoose isku hareereeyay, taas oo aan oran karno waa dhaqan lagu fashilmay, kaas oo dib u dhac u keenay Puntland, sababayna in rag iyo hablo badan oo howlkar ah wax badana tarilahaa dadka iyo dalka ay faraha laabtaan. Sidaa awgeed dhamaan dhaqamandaan kor ku xusani waa kuwo u baahan in isbadal taabo gal ah laga sameeyo, wacyi intaa ka qota dheerna ay la yimaadaan musharaxiinta maanta, hadii kale sheekadu miyaysan noqonay tii reer Xamarka `jug-jug meeshaada joog``.
Hadaba inta aanan u gelin dardaarankayga ayaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago sheeko dhab ah oo ka dhacday wadan Africaan ah, taas oo wax badan inooga faaìidayn karta doorashada maanta.
Shacabka ayaa doortay madaxweyne, kaas oo ay u arkayeen mid wax ka qaban doona dhibaatada haysata, madaxweynahaas oo balaqaadyo badan oo ka turjumaya baahida shacabka sameeyay. Kadib markii xukunkii uu qabsaday ayuu musuqmaasuq iyo in reerkiisu kaalinka keligood ka cabaan ka dhigay maamulkii, shacabkiina gaajo iyo dhinb kii hore ka badan u horseeday. Kadib markii la soo gaaray doorashadii ayaa rag badan isa soo sharaxeen kuwaad oo dhamaan ku andacoonaya inay wax ka qaban doonaan cadaalada, musuqmaasuqa, una adeegi doonaan danaha shacabka. Madaxweynihii markuu arkay in dabayshu sidato, ayuu shacabkii isugu yeeray isbartiimada, dabadeed ayuu khudbad dheer jeedsay. Nuxurka hadalkiisu wuxuu ahaa sedan:
Shacabkaygiiyoow waa run inaan ka soo bixi waayay balanqaadyadii hore, waa run in aniga iyo reerkaygu ku takrifalnay hantidii shacabka iyo qaranka, waa run in aanan wax ka qaban dhibaatadd indin haysatay, hadaba laba idinkaa maanta u dowr leh. Ama inaad doorataan mid gaajaysan oo shan sano oo soo socota isaga iyo reerkiisu masruuftaan hantida shacabka ama aniga oo hada dhargay diyaarna u ah inaan u soo jeesto adeegii shacabka inaad mar labaad idoorataan.
Sidaa awgeed, hadii arintu tooko ber tooko tahay, waxaan oran lahaa shacabka masaakiintaa yaan la daalin beena loo sheegin, hadiise isbedel, horumar, nabadgelyo, iyo cadaalad ay rabaan inay keenaan Musharaxiinta qaarkood, waa in taas laga arkaa Campaign-kooda. Taas waxaan ula jeedaa in musharaxiintu ka waantooba dib ugurashada jifada hoose, iskuna dayaan in ay hantaan dhamaan shacabka reer Puntland iyagoon u eegayn gobol iyo qabiil, taasna waxaa dhalin karta inay la yimaadan hadaf, mabda ama qorshe ayku hogaaminayaan Puntland dhibaatadana kaga saarayaan.
Xaaji Cali Majeerteen ayaa gabay uu tiriyay waxaa ku jiray oraah dhahaysa: Nin anfacii canshuur yahay iimaan ka dheeraa.
Sidaa awgeed , waa in ragga jagadaan u tartamayaa ogaadaan in hantida ay maamuli doonaan ay tahay canshuur laga soo qaaday rag iyo dumar dhidid iyo dhiig u tufay kasbashada hantidaan. Waa inay ogaadaan in xisaab aduun iyo mid aakhiro ka danbayn doonto masuuliyadda. Nin xilqaaday eed qaad.
Qormadaydaan waxaan isku dayi doonaa inaan u iftiimiyo madaxweynaha mustaqbalka dhowr boogood oo u baahan in la dhayo, boogahaas oo maamuladii hore ku fashilmeen dawayntooda. Waa boogo hadii aan dhakhso loo dawayn soo dadajin karta fashil ku yimaada maamulka cusub.
Baarlamaanka Puntland oo ah mid aan lagu soo dooran hab cadaaladeed, dadka xubnaha ka ahina ay yihiin dad aan u qalmin, balse ku caan baxayn laaluush qaadasho si looga meel marsiisto hadba wixii la doono. sidoo kale muujiyay awood dari iyo la xisaabtan la’aan madaxda iyo maamulka Puntland. Sidaa awgeed, Hadii xal laga rabo Puntland waa in la badalaa dhamaan xubnaha baarlamaanka Puntland, waana in lagu soo doortaa hab doorasho beel kasta dhexdeeda ee uusan oday kaaba qabiil ah warqad u soo saxiixin xubinta reerka, waana in shuruudo adag oo aqooneed, cadaaladeed, iyo u qalmidba xilkasnimo lagu xiraa. Sidoo kale waa in la kordhiyaa tirada xubnaha Baarlamaanka si boos loogu helo qabiilada tirsanaya in la caburiyay codkooda iyo xaqooda.
Dowladihii soo maray Puntland oo dhamaan lagu nisbeeyay Madax ka nool. Taas oo micnaheedu tahay in hadba ninka madaxweynaha ahi uu ku takrifalo awooda iyo dhaqaalaha Puntand, isagoo rakaab xun oo aan xilkas ahayn wasiiro u magacowda, si markaasi rag dhufaanan oo isaga ka liita ay u noqdaan, dababeedna shacabka loo fahamsiiyo in madaxweynuhu fiican yahay ee tuugta xaaranta cunataa oo aan shaqaysan ay yihiin wasiirada. Sheekataan oo laga dhaxlay macinta Ummadda waa Siyaad baree, isagoo wasiiradiisa ugu yeeri jiray iimaan laawayaal aan dhargin. Maantana Cadde uu sidoo oo kale u ihaaneeyo wasiiradiisa weliba dadka hortooda ku bahdilo, taal oo ah mid ay istaahilaan, maadaama ay damiir laawayaal yihiin. Inkastoo aan aamin sanahay inay jiraan wasiiro aan sidaa u sii tira badnayn oo howl kar ah, laakiin badanku waa kuwa aan kor ku xusay. Sidaa awgeed, waa in wasiiro xul ah ay noqdaan kuwa taladda dalka qabanaya. Ee aysan sheedaku noqon reer hebaloow nin keensada aan wasiir idiinka dhigo, dabadeedna reerku ay keenaan nahaab xaraan cun ku caan baxay.
Xeer Ilaalinta oo howsheedii gabtay, lana xisaabtami wayday dowladda, sharcigiina ilaalin wayday. Sidaa awgeed, waa in xeer ilaaliyayaal ka madax banaan dowladda la doortaa, sidoo kale hanti dhowr guud oo ku sifoobay karti, cadaalad, aaminimo la magacaabaa, awood buuxdana loo siiyaa la xisaabtanka cidkasta oo hantida qaranka masuul ka ah, sida wisiirka maaliyadda, kastamka, airportka iyo dhamaan madaxda illaha dhaqaalaha.
Canshuur bixiyayaasha oo aan awood u lahayn daba-galka meesha lagu baxshay lacagtooda. Sidaa awgeed, waa in la abuuraa waxa loogu yeero(Tax Payers Association) Ururka canshuur bixiyayaasha, ururkaas oo ay ku bahoobaan, ganacsatada waaweyn sida: kuwa wax dhoofiya soona dejiya, shariikadaha taleefoonada, diyaaradaha, maraakiibta, korantada, biyaha, hoteelada, iyo dhamaan ganacsatada kale oo yar yar. Waa in dowladu dhiiri kelisaa ururkaan una awood siisaa inay dabagal madax banaan ku samayn karto sida loo isticmaalay lacagtooda. Maadaama ay yihiin udbaha iyo awooda dhaqaale ee Puntland ku taagan tahay. Sidoo kale waa in canshuur bixiyayaashu fahmaan sababka looga qaadayo canshuur taas o ah in dowladu ugu adeegto bulshada iyadoo ku fulinaysa arimaha bulshada sida tacliinta , caafimaadka , amniga, iyo dhamaan hayàdaha kale ee u adeega bulshada. Canshuurta micnaheedu maaha in jeebkii ninkii iyo gabadhii u dhididay oo kasbaday laga qaado jeebkale oo aan kasban istaahilina gasho.
Ciidanka dalka (boolis/daraawiish/sirdoon) oo howlgab noqday. Sidaa awgeed, Waa in ciidan cusub oo musahaar u qalma la siiyo la qoraa, laguna soo xulaa: aqoon dugsi sare, jir ahaan caafimaad qabo, balwad iyo laaluush cunisna ka dhowrsan. Waa in ciidankaasi dhalinyarada dalka u bataa, waana in mushahaar iyo nafaqo ku filan la siiyaa si howshooda ay hufnaan u gutaan. (fiiro gaar ah: maanta waxaa soo baxay dhibaatooyin akhlaaqiyaad, dhaqan xumo,tahriibiyayaal,burcad badeed, afduubayaalka ajaanibta iyo mukhaadaraad, sidaa awgeed isbadalkaas waxa la falgeli kara waa dhalinta maanta, ee maaha odayadoo cali boobaaye ka soo haray in ay isbaaro dhigtaan hayàdaha amniga, sidaa awgeed waa in la howlgeliyaa dhalinyarada dalka xoogooda iyo xirfadoodana laga faa’iidaystaa. Hadii kale Al-Shabaab iyo Burcad badeed ayaa u adeegsan doonta burburka Puntland. Khasab maaha in ciidankaasi tiradiisu badan yahay waxaase lagama maarmaan ah in tayadiisu fiican tahay.
Dowlada oo aan haba yaratee wax la taaban karo ka samayn goboladda dalka. Sidaa awgeed, waa in dowladu ogaataa in dalku uu ka kooban yahay gobalo , loona baahan yahay in si cadaaladi ku jirto wax loogu wada qabto dhamaan dalka. Dowladu ka wayn Garoowe iyo Boosaaso, waa in Mudug, Nugaal, Sool, Sanaag, Cayn, Karkaar, Bari iyo Ciid intaba wax ay ka qabataa, maadaama bahwadaagta Puntland dhulkoodu baaxadaas leeyahay.
Jaaliyadda Qurba joogta reer Putland oo noqday howlgab. Sidaa awgeed, waa in maamulka cusubi sameeyaa ama xoojiyaa hay’ad madax banaan oo samaysa isku xirka qurba joogta reer Puntland iyo maamulka iyo shacabka Puntland.
Ururada aan dowliga ahayn ee caalamiga ah oo aan wax la taagan karo ka fulin deegaamada Puntland. Sidaa awgeed, waa in maamulka cusubi uu la xisaabtamaa uraradaasi, isagoo u samayn doona hayàd awood leh, dad xirfad u lihina ka shaqeeyaan , taas oo xaqiijin doonta in ay ururadaasi ka run sheegaan waxqabadkooda , hadii kale ay dalka isaga baxaan.
Ugu danbaystii waxan kula talin lahaa madaxweyna mustaqbalka in dowlad kooban oo aan ilaa 7 wasiir ka badnayn dalku yeesho, sidoo kale ciidan iyo shaqaale dowladeed oo kooban yeesho, iskuna dayo in tayada iyo tacliinta shaqaalahaas kor loo qaado , si taasi u dhacdana waxaa lagama maarmaan ah in (secondary school education) tacliin dugsi sare ugu hoosayso shuruuda tacliineed.
Markii taasi dhacdo kadib waa in dowladu ay awooda saartaa in mushahaar u qalma ay siiso wasiirada, agaasimayaasha , shaqaalaha, iyo ciidamada. Taasi waxay meesha ka saari doontaa in la dhaco hantida qaranka, la qaato laaluush, waxayna laba jibaari doontaa shaqada ay qaban doonaan shaqaalaha dowladu.
Waxaan Ilaaha qaadirka ah ka baryaynaa inuu taladda Puntland gacanta u geliyo qof u qalman, qof danta guud ka hormariya danta gaarka ah, sida mida jifo iyo shakhsiyadeed, sidoo kale inuu Eebe ka saaro dhibaatada Ummada Soomaaliyeed meelay jooganba qalbiyadoodana isku soo dumo, midnimo , wada noolansho iyo cadaaladna qiimaheedana tuso.